एफपीओ जारी गर्ने तयारीमा रहेको एनआरएन लघुवित्तले पहिलो त्रैमासमा कमायो १ करोड ८५ लाख नाफा
मंसिर ५, काठमाडौं । एनआरएन लघुवित्त वित्तीय संस्थाले चालू आवको पहिलो त्रैमासीक वित्तीय विवरण सार्वजानिक गरेको छ ।
उक्त वित्तीय विवरण अनुसार कम्पनीले रू. १ करोड ८५ लाख नाफा कमाएको छ । गत आवको पहिलो त्रैमासमा कम्पनी रू. १३ लाख ९३ हजार घाटामा थियो । चालू आवको पहिलो त्रैमासमा रू. १ करोड ७८ लाखभन्दा बढी खराब कर्जा उठाउनुका साथै खुद ब्याज आम्दानी पनि वृद्धि भएकाले कम्पनीको नाफा बढेको हो । कम्पनीको चुक्तापूँजी रू. ३९ करोड २८ लाख रहेको छ ।
कम्पनीले जगेडा कोषमा रू. ८ करोड ९७ लाख सञ्चित गरेको छ । चालू आवको पहिलो त्रैमाससम्म कम्पनीले रू.३ अर्ब ६३ करोड ८२ लाख सापटि लिएको छ भने रू. ९६ करोड ७५ लाख निक्षेप संकलन गरेर रू. ४ अर्ब ५१ करोड ७ लाख ५३ हजार कर्जा लगानी गरेको छ ।
सो अवधिमा कम्पनीको खुद ब्याज आम्दानी गत आवको पहिलो त्रैमासको तुलनामा ४ दशमलव २१ गुणा वृद्धि भएको छ ।
गत आवको पहिलो त्रैमासमा कम्पनीले रू. १ करोड ७० लाख ६४ हजार खुद ब्याज आम्दानी गरेकोमा चालू आवको पहिलो त्रैमासमा यो आम्दानी रू. ७ करोड १९ लाख ३ हजार पुगेको छ । कम्पनीको प्रतिशेयर आम्दानी रू. ४ दशमलव ७२ र प्रतिशेयर नेटवर्थ रू. १२२.८४ रहेको छ ।
उक्त कम्पनीले पाँच ओटा लघुवित्त वित्त कम्पनीलाई मर्ज गरीसकेको छ । चालू आवमा एफपीओ जारी तथा बोनस शेयर जारी गरेर चुक्तापूँजी रू. ५२ करोड पुर्‍याउने लक्ष्य रहेको कम्पनीले प्रकाशित गरेको वित्तीय विवरणमा उल्लेखे छ ।